Google Play ugbua nwalere ihe eji emepụta ihe ọhụụ | Gam akporosis
Ọ bụ izu ole na ole anyị na-ahụ otú ụfọdụ isi mgbanwe ka Google Play. Gam akporo ngwa ahịa Kwadobe maka tinye akara ngosi. Na mgbakwunye, ọ nọ na-eme mgbanwe ụfọdụ n’usoro ime ihe n’izu ole na ole, dịka a pụrụ ịhụ n’oge na-adịbeghị anya site na iwebata mmegharị aka na ya. Ugbu a, anyị maara na a ga-enwe nhazi ọhụụ n'oge na-adịghị anya.
Dị ka ọ bụ omenala na ụlọ ọrụ, ihe ohuru nke dabere na ihe omuma. Imirikiti ngwa ngwa ahụ nwere atụmatụ dabere na ụkpụrụ ndị a, dị ka Google Drive na nso nso a. Ugbu a ọ bụ ntụgharị nke Google Play n'onwe ya. A haziri nke a hụlarị, ọ bụ ezie na ọ dị ugbu a na ule nyocha.
Ma anyị ahụworị ọhụụ ọhụrụ a nke ụlọ ahịa ngwa gam akporo na-aga iwebata n'oge na-adịghị anya. Ya mere, anyị nwere ike ịchọta echiche banyere ihe anyị ga-atụ anya na ya. Ọ bụ ezie na n'echiche a, ụlọ ahịa na-agbaso nke ọma na ihe a tụrụ anya maka imewe dabere na Ihe Nlekọta Ihe. Ebe ọ bụ na agba ọcha na-achịkwa interface n'oge niile.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ebudaghị ngwa na Google Play
Maka ugbu a, ọ nweghị ihe ekwuru banyere ụbọchị Google Play ga-ewebata usoro a. A na-atụ anya ịbụ afọ a. Asịrị nwere ya ọtụtụ ọnwa na enwere ike ịnwepụta nnukwu ederede n'ụlọ ahịa. O yiri ka nke a ọ ga-abụ eziokwu, dabere na ozi ọhụrụ a. Naanị ihe ị ga-eme bụ ichere ka ule ndị ahụ gwụ. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ n’onwe ha ekwubeghị ihe ọ bụla ruo ugbu a.
Nhazi ohuru na Google Play
Enwere usoro isi mgbanwe ọhụrụ a Google Play imewe. Ọ bụ ezie na ikekwe ọtụtụ ndị ọrụ na-ahụrịrị ha na ilele anya mbụ, ọkachasị ma e jiri ya tụnyere interface dị ugbu a nke ụlọ ahịa ngwa gam akporo nwere. Olee akụkụ ndị a gbanwere n'akụkụ a?
Nke nta nke nta anyị ahụla ka agba si efunahụ ọnụnọ ha na Google Play. Ugbu a, e nwere ntakịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ aka ekpe, nke na-apụ n'anya na nhazi ọhụrụ a. Anyị na-eguzo n'ihu ugbu a a kpam kpam ọcha interface. Naanị akara ngosi ma ọ bụ ọkọlọtọ na-enye ụfọdụ agba. Ọ bụ ezie na ụdị ọcha a nwere ike ikwe ka ọnọdụ ọchịchịrị webata. Ihe nwekwara ike ịbịa ụlọ ahịa n'ọdịnihu. Ee, agba agba maka akụkụ ndị ahụ, edebela ya, ma na nke a, ha gosipụtara ntakịrị ntakịrị. N'ihi ya, ọ bụ na-acha ọcha na agba na-achịkwa.
N'aka nke ọzọ, ogwe nsoro ụzọ gbanwere ọnọdụ. Ọ na-enweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ kemgbe ọ bịara obere oge gara aga. Ugbu a, ọ ga-abụ akụkụ dị mkpa nke interface Google Play. N'okwu a, gaa n'ihu na ala nke ụlọ ahịa ahụ. O nwere ike ịbụ ebe dị mma karịa maka ndị ọrụ. Ebe ọ na-enye ohere igodo ka mma n’oge niile. Na mgbakwunye, ọ dị ka ngalaba egwu na-apụ n'anya site na mkpọgharị ụzọ a. Ma ọ dịkarịa ala na nkwụsị ndị mbụ a enweghi ike ịhụ.
Aghụghọ iji Playlọ Ahịa Google Play n'ụzọ kachasị mma
Anyị na-ahụkwa akara ngosi ọhụrụ. Ọbụghị ihe ijuanya, makana izu ole na ole gara aga, ekwuputala ya kemgbe ha na-aga ịmebata akara ngosi ọhụrụ na ụlọ ahịa ahụ. Yabụ n'echiche a, anyị amatalarị ihe anyị ga-atụ anya na ụlọ ahịa ahụ. Companylọ ọrụ ahụ ahọrọla akara ngosi nwere akụkụ gbara gburugburu, nke yiri ka ọ bụ ọkacha mmasị Google. Ha jikọtara nke ọma n'ụzọ dị otú a na ọhụụ ọhụrụ a na-achọ.
A hụla atụmatụ a na ụdị a 14.5.52 nke Google Play. Ọ bụ ezie na ugbu a ọtụtụ ndị ọrụ anaghị enweta ya. Maka ugbu a, a na-eji ya anwale ule. Ya mere, anyị amaghị oge ole ọ ga - ewe iji wepụta ndị ọrụ niile na gam akporo. N'ezie, ha ga-ahapụrụ anyị akụkọ ọzọ n'akụkụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Play ugbua na-anwale ule ihe eji eme ihe
LG gosipụtara ikike ekwentị nke na-agbanwe agbanwe